रोनाल्डोले किन चाडै फुटबलबाट सन्यास लिन सक्छन !! - Experience Best News from Nepal
इटालियन सिरी ए युभेन्ट्स स्टार एवं पोर्चुगी स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल आफ्नो स्तरको फुटबल पदर्शन देखाउन सक्षम देखिएका छैनन् । हुन् त् रोनाल्डो ३४ बर्षका भैसकेका छन् । अन्य खेलाडीको तुलानामा समेत रोनाल्डो शारीरिक हिसाबमा समेत मजबुत देखिन्छन् । ३४ बर्षको उमेरमा यस स्तरको फुटबल पदर्शन निकै प्रेरणादायी मानिन्छ ।
रोनाल्डोले पहिलो सिजन आफ्नो मड्रिड खेलको स्तरमा पुग्ने निकै पहल गरेका थिए भने यस सिजन रोनाल्डो चम्किन सकेका छैनन् । रोनाल्डोका निम्ति फुटबल सन्यास विकल्प नहुन सक्छ तर उनले विभिन्न माध्यममा आफ्नो फुटबल पूर्ण विश्राम बारे बोलेको समेत देखिन्छ । केहि समय अगाडी समेत रोनाल्डोले आफुले फुटबल सन्यास तत्काल नभए पनि १ या २ साल भित्र लिने बारे बताएका थिए ।
तर रोनाल्डोले फुटबल सन्यास लिन किन सक्छन ?
रोनाल्डोले आफ्नो जीवन स्तरमा फुटबल बाहेक पनि विभिन्न माध्यम मार्फत ठुलो कमाइ गरिरहेका छन् साथै विभिन्न पेशा र ब्यबसायमा उनको पहुच देखिन्छ । सामाजिक सन्जाल मार्फत समेत रोनाल्डोले कमाइ गरिरहेका छन् । रोनाल्डोको नाममा विभिन्न होटल, गार्मेन्ट उद्योग साथै विभिन्न ब्राण्ड रहेको छ जसको कारण फुटबल रोनाल्डोका निम्ति विकल्प हुन सक्छ ।
पाच पटकका बालोन डी’ओरका विजेता रोनाल्डोले कुनै समय ४० बर्षसम्म सन्यास नलिने समेत बताएका थिए । विभिन्न ठाउँमा रोनाल्डोले सामाजिक कार्य गर्दै आएका छन्, रगत दिने देखि गरिबी प्रति सहयोग जुन रोनाल्डोका निम्ति समय समापनका कारक बन्न सक्छन ।
फुटबलमा रहेको ख्यातीले रोनाल्डो हाल यस स्तरमा देखिएका हुन्, रोनाल्डोको स्तर उकास्ने फुटबल नै रहेको हुदा रोनाल्डो सन्यास पश्चात पनि कुनै न कुनै माध्यम मार्फत फुटबलसंग निकटता राख्नेमा कुनै संकोच छैन । यधपी रोनाल्डोले हालै सन्यासका बारे भने एकिन पुष्टि गरेका छैनन ।
फुटबल गरिमामय पुरस्कार बालोन डी’ओर छैटौ पटक बार्सिलोनाका लिओनेल मेस्सीलाई !! बनाए विश्व रेकर्ड !!